Mateu 15 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
15 Zvino vaFarisi nevanyori vakauya kuna Jesu vachibva kuJerusarema,+ vachiti: 2 “Nei vadzidzi vako vachidarika tsika yevanhu vomunguva yekare? Somuenzaniso, havagezi maoko avo kana vava kuda kudya zvokudya.”+ 3 Achipindura, iye akati kwavari: “Nemiwo munodarikirei murayiro waMwari nokuda kwetsika yenyu?+ 4 Somuenzaniso, Mwari akati, ‘Kudza baba vako naamai vako’;+ uye, ‘Anotuka baba kana amai ngaafe.’+ 5 Asi imi munoti, ‘Munhu wose anoti kuna baba vake kana amai: “Chose chandiinacho chandingakubatsirai nacho chipo chakatsaurirwa kuna Mwari,” 6 haambofaniri kukudza baba vake.’+ Naizvozvo makaita kuti shoko raMwari rishaye simba nokuda kwetsika yenyu.+ 7 Imi vanyengeri,+ Isaya+ akaprofita zvakakodzera pamusoro penyu, paakati, 8 ‘Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni.+ 9 Vanoramba vachindinamata pasina, nokuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso.’”+ 10 Naizvozvo akashevedza boka revanhu kuti riswedere pedyo, akati kwavari: “Teererai munzwisise:+ 11 Zvinopinda mumuromo hazvisi izvo zvinosvibisa munhu; asi zvinobuda mumuromo ndizvo zvinosvibisa munhu.”+ 12 Zvino vadzidzi vakauya, vakati kwaari: “Munoziva here kuti vaFarisi vagumbuka pavanzwa zvamataura?”+ 13 Achipindura, iye akati: “Chinomera chose chisina kudyarwa naBaba vangu vokudenga chichadzurwa.+ 14 Varegei vakadaro. Ivo vatungamiriri mapofu. Zvino, kana bofu rikatungamirira bofu, ose ari maviri achawira mugomba.”+ 15 Petro akapindura, akati: “Nyatsotitsanangurirai mufananidzo wacho.”+ 16 Iye akati: “Nemiwo hamusati manzwisisa here?+ 17 Hamuzivi here kuti zvinhu zvose zvinopinda mumuromo zvinopfuura zvichipinda muura uye zvinobuda zvichipinda mugomba retsvina? 18 Zvisinei, zvinhu zvinobuda mumuromo zvinobva mumwoyo, uye zvinhu izvozvo zvinosvibisa munhu.+ 19 Somuenzaniso, mumwoyo munobuda kufunga kwakaipa,+ umhondi, upombwe, ufeve, umbavha, uchapupu hwenhema, kumhura.+ 20 Izvi ndizvo zvinhu zvinosvibisa munhu; asi kudya zvokudya nemaoko asina kugezwa hakusvibisi munhu.”+ 21 Zvino Jesu achibva ipapo, akaenda kumativi eTire neSidhoni.+ 22 Uye tarira! mumwe mukadzi wokuFenikiya+ womunzvimbo idzodzo akauya, akashevedzera, achiti: “Ndinzwirei ngoni,+ Ishe, Mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu akabatwa kwazvo nedhimoni.” 23 Asi iye haana shoko raakamupindura. Naizvozvo vadzidzi vake vakauya, vakatanga kumukumbira vachiti: “Mudzingei; nokuti anoramba achishevedzera ari shure kwedu.” 24 Achipindura, iye akati: “Handina kutumwa kuna ani naani kunze kwokumakwai akarasika eimba yaIsraeri.”+ 25 Mukadzi wacho paakasvika, akamupfugamira, achiti: “Ishe, ndibatsirei!”+ 26 Achipindura, iye akati: “Hazvina kunaka kutora chingwa chevana wochikandira imbwa duku.” 27 Mukadzi wacho akati: “Hungu, Ishe; asi chokwadi imbwa duku dzinodya mafufu anowa patafura ravanatenzi vadzo.”+ 28 Jesu akabva amupindura kuti: “Haiwa iwe mukadzi, kutenda kwako kukuru; ngazviitike kwauri sezvaunoda.” Mwanasikana wake akapora kubvira paawa iyoyo.+ 29 Achigura nenyika kubva ipapo, Jesu akasvika pedyo negungwa reGarireya,+ uye akwira mugomo,+ akanga agere imomo. 30 Mapoka makuru evanhu akabva asvika kwaari, aine vanhu vakanga vachikamhina, vakaremara, mapofu, mbeveve, nevamwe vazhinji vakangodarowo, uye vakangovaisa patsoka dzake, iye akavarapa;+ 31 zvokuti boka revanhu rakashamiswa zvavakaona mbeveve dzichitaura nevaikamhina vachifamba nemapofu achiona, uye vakakudza Mwari waIsraeri.+ 32 Asi Jesu akashevedza vadzidzi vake, akati:+ “Ndinosiririswa+ neboka iri revanhu, nokuti atova mazuva matatu avagara neni uye havana chokudya; uye handidi kuti vaende vasina kudya. Zvimwe vangaziya mumugwagwa.” 33 Zvisinei, vadzidzi vakati kwaari: “Tichawana kupi zvingwa zvinokwana kugutsa boka revanhu rakakura kudai munzvimbo ino isina vanhu?”+ 34 Jesu akati kwavari: “Mune zvingwa zvingani?” Ivo vakati: “Zvinomwe, nehove duku shomanana.” 35 Naizvozvo, pashure pokunge arayira boka revanhu kuti ritsenhame pasi, 36 akatora zvingwa zvinomwe nehove uye pashure pokunge aonga, akazvimedura, akatanga kupa vadzidzi, vadzidzi vakapawo mapoka acho evanhu.+ 37 Zvino vose vakadya, vakaguta, uye vakaunganidza zvimedu zvakasara zvikaita matengu manomwe akazara.+ 38 Asi vakanga vachidya vaiva varume zviuru zvina, vakadzi nevana vaduku vasingabatanidzwi. 39 Akazoendesa mapoka acho evanhu, akapinda muchikepe, akasvika kunzvimbo dzeMagadhani.+